एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरकाे आईपीओमा लगानी गर्नु कत्तिकाे उचित ? यस्ताे छ तथ्य र तर्क – BikashNews
२०७७ साउन १६ गते १६:२२ मञ्जरी पौडेल
काठमाडौं । २०६९ साल भदौ ३१ गतेदेखि गैरआवासीय नेपालीमा रहेको पुँजी र सीपलाई नेपालको विकासमा लगाउने हेतुले स्थापना भएको कम्पनी हो, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी । काठमाडौंको चावहिलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस कम्पनी पब्लिक लिमिटेडको रुपमा दर्ता भई ‘कम्पनी ऐन २०६३’ अन्तर्गत काम कारोबार गर्दै आएको छ ।
कम्पनीको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत उत्पादन तथा अन्य पूर्वाधार सम्बन्धि कार्य गर्ने कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने रहेको छ । जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका साथै अन्य पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरुको निर्माण, संचालन र व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था भएको हुँदा नेपाली लगानीकर्ताको लागि यो लाभदायक र उपयुक्त क्षेत्र रहेको छ ।
सञ्चालनमा आएको ७ वर्षपछि कम्पनीले ३३ करोड ९८ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर(आईपीओ) जारी गरेको छ । कम्पनीले साउन १६ गतेबाट एक सय अंकित दरका ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ ।
कम्पनीले जारी पुँजीको ७० प्रतिशत सेयर संस्थापक सेयरधनी र ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण(कर्मचारी समेत) मा निष्काशन तथा बिक्री गरी बाँडफाँड गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही बमोजिम जारी पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात ३३ करोड ९८ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखेको हो ।
इच्छुक सर्वसाधारणले साउन १६ देखि छिटोमा साउन २१ गते बैंकिङ समयसम्ममा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३१ लाख ६० हजार १८० कित्तासम्मकाे लागि आवेदन दिन पाउने छन् । यदि संस्थाले माग गरेजति आवेदन नपरेमा ढिलोमा भदौ ३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
जारी पुँजी एक अर्ब १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको यस कम्पनीमा ७ सय ९५ जना संस्थापक सेयरधनी रहेका छन् । हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी ७९ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गरी बाँडफाँड गरेपश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । कुनै सहायक कम्पनी नभएकोले कम्पनीको कारोबार र समष्टिकृत कारोबार एउटै रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.०४ रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक रुपमा बढेर आगामी तीन वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ४.३ रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, सो अवधिमा प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि बढेर एक सय ४ रुपैयाँ पुग्ने छ कम्पनीको प्रक्षेपण रहेको छ । कम्पनीकाे प्रक्षेपण लगानीकर्तालाई लाेभ्याउने खालकाे छैन ।
त्यस्तै, कम्पनीको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि यता हालसम्म नोक्सान व्यहोरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा एक करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको यस कम्पनीले आगामी तीन आवमा ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । एक अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीकाे चुक्ता पुँजी भएकाे कम्पनीले ३/४ कराेड रूपैयाँ नाफा गरेमा लगानीकर्ताले खुशी हुने लेवलकाे प्रतिफल पाउँदैनन् ।
विगत तीन वर्षको नेटवर्थमा कम्पनीको औषत प्रतिफल २.३८ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले आव २०७३/७४ मा ४.२१ प्रतिशत र आव २०७४/७५ मा ३.१८ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गरेको थियो । जतिबेला बैंकहरूले निक्षेपमा १० प्रतिशत वा साे भन्दा बढी व्याज दिएका थिए, त्यतिबेला कम्पनीले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत भन्दा कमकाे प्रतिफल दिनुले लगानीकर्तालाई लाभ भएकाे मान्न सकिदैन ।
सेयर निष्काशनको लागि कम्पनीले केयर रेटिङ्ग नेपालबाट ‘केयर एनपी आईपीओ ग्रेड ४’ प्रमाणपत्र पाएको छ । जसले कम्पनीको आधारहरु औसतभन्दा कमजोर रहेको जनाउँछ ।
सर्वसाधारणहरुले कम्पनीको आइपीओमा किन लगानी गर्ने ?
‘समग्रमा कम्पनीले गरेको लगानी सुरक्षित छन् । कम्पनी राम्रो ट्रयाकमा रहेको छ । आगामी दिनमा पनि निकै सोचेर मात्रै कम्पनीले लगानी बढाउँदै लानेछ । यो कम्पनीको हिस्सेदार बन्न पाउनु सर्वसाधारणका लागि पनि एउटा राम्रो अवसर हो । प्रतिफल पक्का भएकाले लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं’- सीईओ उषा खतिवडा बताउँछिन् ।
सेयर पूर्ण रुपमा बिक्री नभएमा के हुन्छ ?
उक्त निष्काशित सेयर पूर्ण रुपमा बिक्री नभएपनि प्रत्याभुतिकर्ताद्वारा सकारिने कम्पनीले जनाएको छ । जसको लागि हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड, कुमारी क्यापिटल लिमिटेड तथा मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई कूल ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता सेयरको निष्काशनको लागि प्रत्याभुतिकर्ता नियुक्त गरिएको छ ।
उनीहरुलाई प्रत्याभुति शुल्क बापत कूल ६७ लाख ९६ हजार ९२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यदि निष्काशन गरिएको सेयर पुरै बिक्री भएमा उक्त प्रत्याभुतीकर्तालाई ३३ लाख ९८ हजार ४६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिने छ । कुनै पनि नेपाली तथा गैह्र आवासिय नेपाली नागरिकले सेयर खरिद गर्न आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रत्येक आवेदकले कम्तीमा १० कित्ता र बढीमा ३१ लाख ६० हजार एक सय ८० कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आईपीओबाट उठेको रकम कम्पनीले कुन क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्छ ?
सेयर निष्काशनबाट उठेको कुल रकमलाई कम्पनीले विभिन्न जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने परियोजनामा सेयर वा ऋण लगानी गर्ने छ । जुन कम्पनीको प्रमुख उद्देश्य नै हो । त्यस्तै, कम्पनीले विभिन्न जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने परियोजना संचालन गर्ने कम्पनीहरु र अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने परियोजना संचालन गर्ने कम्पनीहरुमा समेत सेयर वा ऋण प्रवाह गर्नका लागि उपयोग गर्ने छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा १० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा २५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ४० करोड रुपैयाँ संचित लगानी गर्ने जानकारी गराएको छ । उक्त लगानी रकमलाई ठूलो खोला हाइड्रोेपावर, जुम खोला हाइड्रोपावर र मिडिल कालिगण्डकी हाइड्रोपावर परियोजनामा लगानी गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ ।
कुन परियाेजनामा कति ?
हालसम्म स्वपुँजीको रुपमा लगानी गरेको हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडद्वारा प्रबद्र्धित दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजना २७ मे.वा., सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रबद्र्धित मिडिल तमोर जलविद्युत आयोजना ७३ मे.वा., स्वेतगङ्गा हाइड्रोपावर एण्ड कन्सट्रक्सन लिमिटेडद्वारा प्रबद्र्धित तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजना २८.१ मे.वा., माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत लिमिटेडद्वारा प्रबद्र्धित माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना १४.३ मे.वा. का जलविद्युत आयोजनाहरु रहेका छन् । साथै, अन्य आयोजनाहरु पनि छनौटको क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्ता छन् जोखिमहरूः
कम्पनीलाई वित्तीय साधनको अभावबाट हुने जोखिम जस्तै, सेयर लगानीमा भुक्तानी गर्न समस्या पर्ने छ । कम्पनीले गरेका लगानी र ऋण खराब हुन गएमा हुने जोखिम र व्याजदरमा आउने परिवर्तनबाट जोखिम हुन सक्छ । त्यस्तै, कम्पनीले लगानी गरेको अन्य कम्पनीहरुको परियोजना विभिन्न परिस्थितिले गर्दा समयमा नै निर्माण हुन नसकेमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
कम्पनीले लगानी गरेको गरेको अन्य कम्पनीको परियोजनाहरुमा मूल्य अभिवृद्धि हुँदा लगानी रकम बढ्ने र प्रतिफल आउन ढिलाई हुने जोखिम रहने छ । विदेशी विनिमय कारोबार गर्दा विनिमय दरमा हुने परिवर्तन तथा देशको वैदेशिक ब्यापार नीतिमा हुने परिवर्तनबाट जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने छ ।
त्यस्तै, पुँजी बजारको अवस्थामा आउने उतार चढावबाट र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुन सक्ने आर्थिक मन्दीबाट नेपाली बजारमा पर्न सक्ने असरबाट आर्थिक जोखिम हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारी नीति तथा नियमहरुमा हुने परिवर्तन, नयाँ नयाँ सूचना प्रविधिहरुको विकाससँगै उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रहेका छन् ।
तर, हाल कम्पनीले पुरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाहरु पुरा गरिसकेको र प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पुर्ण इजाजतपत्रहरु प्राप्त गरी सकेकोले सो जोखिम नरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीको कर्जा तथा लगानी खराब भई हुनसक्ने जोखिमहरुको लागि कम्पनीले कर्जा तथा लगानी जोखिम कोषको व्यवस्था गर्ने छ । कम्पनीले वित्त बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाको साथै क्षेत्रीयकरण र विश्वब्यापीकरणका कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमहरु न्युनीकरण गर्नका लागि जनशक्ति विकासमा ध्यान पुर्याउनको साथै अन्य व्यावसायिक जोखिमहरुबाट उत्पन्न हुन सक्ने हानि नोक्सानीको लागि व्यवस्थापन चनाखो भई सम्भावित हानि नोक्सानी कम गर्न सक्षम र प्रतिवद्ध रहेको कम्पनीले आफ्नो विवरण मार्फत जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै अन्य विभिन्न जोखिमहरु न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, समयानुसारको आधुनिक प्रविधि, स्पष्ट नीति तथा नियमहरुको निर्माण एवम् समयानुसार आफ्नो सेवा तथा सुविधाहरुमा परिवर्तन गर्दै लगिने कम्पनीको नीति रहेको छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कूल ११ जना रहेका छन् । संस्थापक समूहका सेयरधनीको तर्फबाट ६, सर्वसाधारण समूहका सेयरधनीको तर्फबाट ३ र स्वतन्त्र सञ्चालकको तर्फबाट २ जना रहेका छन् । यी सबैको कार्यकाल ४ वर्षको हुने छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कार्यकारी अध्यक्ष जीवनाथ लामिछाने तथा सञ्चालकमा कृष्ण प्रसाद पाण्डे, महेश कुमार श्रेष्ठ, रामेश्वर शाह, शेष घले र बालकृष्ण गुरुङ्ग रहेका छन् । उनीहरू सबै एनआरएनका नेता हुन् ।
यस कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा रहेका लामिछानेले एमएससी(सिभिल इन्जिनियरिङ्ग) सम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् । उनी सानिमा हाइड्रोपावर लि., मेडीकेयर नेशनल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लि., सानिमा बैंक लि., कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि., कान्तिपुर/एक्मी इन्जिनियरिङ्ग कलेज, सोपान मल्टिपल, होटल अकामा प्रा.लि. र नेक्टार इन्टरनेशनल लगायतका संघ संस्थामा आवद्घ रहेका छन् । उनी गैर आवासिय नेपाली संघका संस्थापक सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।
कम्पनीमा कसको सेयर स्वामित्व कति ?
कार्यकारी अध्यक्ष लामिछानेको यस कम्पनीमा ८० हजार ६ सय ४३ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
संस्थापक सेयरधनीमा १० जना रहेका छन् । जसमध्ये कृष्ण प्रसाद पाण्डे, विश्वनाथ पौडेल, कमल लामिछाने, विनोद कुँवर, केशव प्रसाद सापकोटा, उदय राज कँडेल, उर्मिला उप्रेतीको प्रतिव्यक्ति एक लाख ७ हजार ५ सय २४ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । त्यस्तै, कुमार प्रसाद पन्त, महेश कुमार श्रेष्ठ र उपेन्द्र महतोको प्रतिव्यक्ति ८० हजार ६ सय ४३ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
त्यसैगरी, संचालक शेष घलेको ५३ हजार ७ सय ६२ कित्ता, बाल कृष्ण गुरुङ्को ६ हजार ४ सय ५२ कित्ता र रामेश्वर शाहको ५ हजार ३ सय ७७ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । त्यस्तै, एनआरएन अष्ट्रेलिया हाइड्रो ग्रुपको ६ लाख ५८ हजार २ सय ६२ कित्ता र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको ३ लाख ४१ हजार ५ सय ५ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
यस्तो छ व्यवस्थापकीय टीम
हाल कम्पनीको म्यानेजमेन्ट (व्यवस्थापकीय टीम)मा प्रमखु कार्यकारी अधिकृत उषा खतिवडा, कम्पनी सचिव बद्री विशाल घिमिरे र स्वतन्त्र वित्तीय परामर्शदाता प्रशिद्ध न्यौपाने गरी तीन जना रहेका छन् ।
डेढ वर्षदेखि यस कम्पनीको सीईओको रुपमा कार्यरत रहेकी खतिवडासँग हाइड्रो पावर क्षेत्र र विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रमा १५ वर्षको लामो अनुभव रहेको छ ।
उनी पटक-पटक नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा हुने सभा सम्मेलनमा पनि सरिक रहेकी छिन् । यसै वर्ष कन्सियस कम्पनी-सोनोमा, १३२५ ब्रोडवे, यूएसए सोनोमाले खतिवडालाई वर्ल्ड चेन्जिङ वुमेन अवार्डबाट सम्मानित गरेको थियो । त्यस्तै, २०२० मा आरएसटीसीएले खतिवडालाई ‘कर्पाेरेट वोमेन अफ दि इयर-२०२०’ र ‘मस्ट इन्फ्युयन्सियल वोमेन’ बाट सम्मानित गरेको थियो ।
उता व्यवस्थापकीय टीममा रहेका कम्पनीका सीईओ खतिवडा, कम्पनी सचिव घिमिरे र स्वतन्त्र वित्तीय परामर्शदाता न्यौपाने कसैको पनि एनआरएन इन्फ्राइस्ट्ररको एक कित्ता पनि सेयर छैन ।
अब लाइनमा होईन अनलाइनमै डिम्याट खाता खोल्न सकिने, नम्बर पनि १ घण्टा भित्रै पाइने
चन्द्रागिरी हिल्सको आईपीओ बाँडफाँड, तपाइँलाई कति पर्यो ?
माघ ९ गतेदेखि ‘सानिमा लार्ज क्याप फण्ड’को बिक्री खुला, कति गर्ने लगानी ?